Isbeddellada moodada ee dharka haweenka ee 2021
Dharka ayaa ah shey lagama maarmaan u ah haweenka xilliga guga iyo xagaaga. Qaabka dhaqanka, qaabka dheddigga iyo qaabka caqliga cusub ayaa ah qaababka ugu caansan ee loo yaqaan '2021 guga' iyo dharka xagaaga. Noocyada caleenta lotus, laminated, pleated, strapless iyo qaababka kale waxay buuxin karaan shuruudaha qaabka ee ...
Falanqaynta astaamaha dharka bajamas ee caadiga ah
Bajaammada waligoodba waxaa loo isticmaali jiray alaab guri, oo xirashadaasina waxay dadka ka dhigeysaa inay ku nastaan. Ku seexashada dharka hurdada ayaa u wanaagsan hurdo waxayna ka hortagi kartaa cuduro badan. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto dhar hurdo raaxo leh. Marka, dhar noocee ah ayaa ugu wanaagsan dharka hurdada? Bajam jiilaal asal ahaan waa suuf saafi ah, ...
Dharka dharka xarka ah ee silk ayaa leh faa'iidooyin badan
Faa’iidooyin badan ayaa ku jira xirashada dharka hurdada ee xariirta, maxaa yeelay waxay ka samaysan yihiin xariir waxayna leeyihiin neefsasho fiican. Xariirta dhabta ahi waxay leedahay faa iidooyin caafimaad. Xariirta Mulberry, oo badanaa loo yaqaan xariir dhab ah, waxaa lagu magacaabaa "fiber queen". Waa hanti naadir ah oo aadamigu si dabiici ah u siiyay. Waxay leedahay taariikh t ...